सोलु मेयरमा विजयी भएर कांग्रेसको साख जोगाउने नाम्गेल जाङबु शेर्पाको पृष्ठभुमी ? – Himal FM 90.2 MHz
सोलु मेयरमा विजयी भएर कांग्रेसको साख जोगाउने नाम्गेल जाङबु शेर्पाको पृष्ठभुमी ?
सोलुखुम्बु, १९ असार
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको मेयरमा नाम्गेल जाङबु शेर्पा बिजयी भए । एमालेका उमेदवार आङइगेले शेर्पालाई १ सय ५९ मतले पछि पार्दै रोमान्चक जित हात पारेका मेयर शेर्पाको पृष्ठभूमि कस्तो छ ?
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित नाम्गेल जाङबु शेर्पा वि.स. २०३८ सालमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका – २ मोपुङमा जन्मेका हुन् । बाबा पेम्बा ओङछु शेर्पा र आमा कान्छी शेर्पाको कोखवाट माईलो सन्तानको रुपमा जन्मेका शेर्पा सामान्य कृषक परिवारमा हुर्केका हुन् । माध्यमिक तहको शिक्षा सम्म जुनवेशी माविवाट लिएका शेर्पाले ९ बर्षको उमेरमा कक्षा ३ मा पढ्दै थिए । सोहि बेला बाबालाई प्यारालाईसिस भएपछि पढाई छाडेका उनले ३ बर्ष पछि मात्रै कक्षा ५ मा भर्ना भई शिक्षालाई अघि बढाए । दुई दाजुभाई र तिन वहिनी सहित हुर्केका नाम्गल शेर्पा मजदुरी गरेरै भएपनि पढ्न नछाडेको बताउछन् । उनले पढाई खर्च र घर व्यवहार चलाउनका लागि विद्यालय हाप्न समेत तयार हुन्थे । परम्परागत कृषि र पशुपालनवाट भएको आम्दानीवाट चलेको परिवार बाबाको मृत्यूपछि अझ संकटमा परेको थियो । शेर्पाका दाईले नाकगोठ हेर्थे भने उनले कृषिकर्म गरेरै घरखर्च चलाउथे । आमा शारिरीक रुपमा कमजोर भएकाले पनि परिवारको खर्च व्यवस्थापनमा मुस्किल हुन्थ्यो ।
२०५८ सालमा सेकेण्ड डिभिजनमा एसएलसी पास गरेका नवनिर्वाचित शेर्पा उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौ लागे । सरस्वती क्याम्पसवाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्र्तिण गरेका उनले पढाई र बसाई खर्च व्यवस्थापनका लागि ट्रेकिङ गर्न थाले । ट्रेकिङ गर्दागर्दै विदेशी व्यक्तिहरुसंगको संगतले गैरसरकारी संस्था स्थापना गििर समुदायको हितमा काम गर्ने अवधारणा स्वरुप सन् २००१ मा हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाललाई अघि बढाएका थिए । सो संस्थालाई सन् २००७ मा आए आधिकारिता दिएको शेर्पाको भनाई छ । त्रिचन्द्र कलेजवाट स्नातक गरेका उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयवाट समाजशास्त्र र मेजर अग्रेजीमा स्नाकोत्तर गरे । हाल ग्रामिण विकासमा स्नातक गरिरहेका छन् ।
पर्यटन व्यवसायलाई पेशा र राजनितिलाई समाजसेवाको रुपमा आत्मसाथ गर्दै आएका शेर्पा कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा देखि नै विद्यार्थी राजनितिमा सक्रिय थिए । उनले २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन सक्रिय भएको सम्झन्छन् । २०५४ मा नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्य लिएका शेर्पा २०५९ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको जिल्ला सदस्यमा निर्वाचित भए । २०६१ सालमा नेविसंघ जिल्ला कोषाध्यक्ष बनेका उनी २०६२/६३ जन–आन्दोलन सघर्ष समिति सदस्य समेत रहेका थिए । २०६३ साल यता निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय सदस्य रहेका उनी सामाजिक विकासका काममा सक्रिय थिए ।
नेपाल शेर्पा विद्यार्थी मञ्चका सचिब भईसकेका नाम्गेल जाङबु शेर्पा हिमालयन प्रोजेक्ट नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । सोलुखुम्बुको लिखुपिके क्षेत्र र नगर क्षेत्रका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार बालबालिकालाई शिक्षा आर्जनमा सहयोग गर्दै आएका थिए । भुकम्पपछिको अवस्थामा राहत र पुर्ननिर्माणमा राज्य संग सहकार्य गरेको उनी नेतृत्वको गैरसरकारी संस्थाले महिला शसक्तिकरण र आत्मनिर्भरताको पक्षमा काम गर्दै आएको छ ।
अहिले शेर्पाको परिवारमा आमा, दाजुभाई, ३ वहिनी, श्रीमति सहित एक छोरा, एक छोरी रहेका छन् । आत्मविश्वास, ईच्छाशक्ति नै आफ्नो सम्पत्ति ठान्ने नवनिर्वाचित मेयर नाम्गेल जाङबु शेर्पामा समुदायको विकासमा लामो समय काम गरेको अनुभव देखिन्छ । कम बोल्ने, निर्णय क्षमता भएका, नम्रता र मिजासिला स्वभावका शेर्पा ग्रामिण क्षेत्रको विकासकै लागि वैदेशीक अबसर पनि त्यागेको बताउछन् । डेनमार्क, नर्बे, फिनल्याण्ड लगायतका देशको भ्रमण गरिरहेका छन् । विदेशमा राम्रो कमाई र काम पाउदा सम्म पनि नलोभिएको उनीमा समाजसेवा र विकासमा खट्ने तिब्र तत्परता देखिन्छ ।
सोलुखुम्बुको एक मात्र नगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी भएर शेर्पाले जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको साख जोगाएका छन् । कांग्रेसको तर्फवाट उम्मेद्धार भएर जितेपनि नगरपालिकाको विकास र सम्बृद्धिको लागि साझा भएर काम गर्ने उनको सोच छ । बाह्रय र आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेरै नगर क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन क्षेत्रको चौतर्फी विकास गर्न सकिने आत्मविश्वास रहेको मेयर शेर्पाको भनाई छ । नगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाई नागरिकलाई प्रभावकारी प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, विद्युतको पहूँच बृद्धि गरि रोजगारीको सृजना गर्ने नवनिर्वाचित मेयर नाम्गेल जाङबु शेर्पाको योजना रहेको छ ।